Tag: kutungamira | Martech Zone
Dhizaini Dhizaini: Mafonti, Mafaira, MaAcronyms uye Marongero Matsananguriro
Muvhuro, June 1, 2020 Muvhuro, June 1, 2020 Douglas Karr
Izwi rakajairika rinoshandiswa nevagadziri vemifananidzo uye marongero ewebhu uye anodhinda.
Chitatu, October 21, 2015 Svondo, October 25, 2015 Douglas Karr
Typography inonakidza kwandiri. Tarenda remagadziri ekugadzira mafonti ayo ari maviri akasarudzika uye kunyangwe anokwanisa kuratidza manzwiro hapana chaanoshaya. Asi chii chinoumba tsamba? Diane Kelly Nuguid akaisa pamwechete yekutanga infographic kuti ipe nzwisiso muzvikamu zvakasiyana zvetsamba mu typography. Dzvanya pairi kuti uone kuzere kuona. Typography Terminology Glossary Aperture - Iyo yekuvhura kana yakapoteredzwa nzvimbo isina kunaka yakagadzirwa ne